47 Maxaabiis Kunteenaro ku jiray oo lagu wareejiyay maamulka Jubbaland - Caasimada Online
Home Warar 47 Maxaabiis Kunteenaro ku jiray oo lagu wareejiyay maamulka Jubbaland
47 Maxaabiis Kunteenaro ku jiray oo lagu wareejiyay maamulka Jubbaland
Muqdisho (Caasimada Online) – Dowladda Kenya ayaa ku wareejisay maamulka Jubbaland Maxaabiis Soomaaliyeed oo ku xirnaa dalka Kenya, kuwaasi oo qabay dhibaayo xoogan.
Taliyaha Ciidamada degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose Heybe Axmed Cabdullaahi ayaa warbaahinta u sheegay in dadkaani ay ku jireen Konteenaro ku yaalla dalka kenya,halkaasina ay maxaabiis ku ahaayeen.
Waxaa uu sheegay in dadkaasi Markii hore laga waday Soomaaliya , islamarkaana la doonaayay in laga ganacsado, isagoo sheegay in dhibaato xun ay ku heysatay dalka Kenya maadaama ay ku xirnaayeen Kunteerano.
Maamulka Jubbaland ayuu sheegay taliye Heybe in xiriir ay la sameeyeen dowladda Kenya in ay u suurta gelisay in lagu soo wareejiyo dadkaani, isagoo sheegay inay xanaaneyn doonaan, maadaama ay ka muuqato nolol adag.
Tirada dadka lagu wareejiyay maamulka Jubbaland ayaa dhan 47 qof oo badankood laga waday gudaha dalka Soomaaliya, sida uu sheegay taliyaha Dhoobleey.
Dadka lagu wareejiyay maamulka Jubbaland ee Muddada ku dhibaateysnaa dalka kenya waxaa ku jira haween iyo Caruur.